अनुहारमा रहेको डन्डिफोर दाग हटाउन भान्सामा पाइने ५ चीज ! | सुदुरपश्चिम खबर
अनुहारमा आउने डन्डिफोरको दा’गले धेरैलाई सताएको हुन्छ । यस्ता दा’गहरु लामो समयसम्म अनु’हारमा रहिरहने भएकाले धेरै चिन्तित हुन्छन् । कतिपयले यस्तो दा’ग ह’टाउनका लागि विभिन्न औ’षधिको प्रयोग पनि गर्ने गर्छन् । तर यस्तो दा’ग हटाउन लगाउने औ’षधिले अन्य छा’लाका सम’स्याहरु पैदा गर्छन् । यस्ता दा’गका लागि भान्सामा नै पाइने केही औ’षधिहरुको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
जसले सजिल्यै दा’ग हटाउन मद्दत गर्छ । घ्युकु’मारीको जेल छा’लाको देखभाल गर्नका लागि घ्युकुमारी निकै फाइदाजनक मानिन्छ । यसले छा’लालाई कोमल बनाउँछ । तर यसले दा’ग कम गराउँछ । डन्डि’फोरको दा’गमा दैनिक घ्युकुमारी जेल लगाउँदा रातभरीमा दा’ग हराउँछ । टी ट्री तेल यो तेलमा एन्टि’ब्या’क्टोरियल गुण पाइन्छ ।
थोरै नरिवलको तेलमा टी ट्री तेल दुई थोपा हालेर मिसाएर दाग भएको ठाउँमा लगाउनुस् । तेल लगाएको १० मिनेटपछि मनतातो पानीले पखाल्नुहोस् । ग्रीन टी अनु’हारको लागि ग्रीन टी निकै फाइदाजनक हुन्छ । पानीमा ग्रीन टीको ब्याग हाल्ने र उमाल्ने त्यसपछि पानी चिसो बनाउने । त्यसपछि दा’गमा लगाउने र केही समयपछि पानीले पखाल्ने गर्दा अनु’हार सफा हुन्छ ।
मह मह कालो दा’ग धब्बाका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । महमा एन्टिब्या’क्टेरिल र एन्टि’इन्फ्लेमेटरी गुण हुने भएकाले यसले दा’ग हटाउन निकै सहयोग गर्छ । दा’ग भएको ठाउँमा एक वा दुई थोपा मह लगाएर रातभर छोड्ने र बिहानै पानीले पखाल्ने गर्दा अनुहार सफा हुँदै जान्छ । बरफ एउटा सफा कपडामा बर’फको टु’क्रा राख्ने र दा’गमा चारैतिर घुमाएर लगाउने गर्दा डन्डि’फोर कम हुने र त्यसको दु’खाई पनि कम हुन्छ । ‘
यो पनि पढ्नुहोस्। मो’टोपन अहिले धेरैका लागि टा’उको दु’खाइको विषय बनेको छ । यद्यपि मो’टोपन क्रमिक रुपमा बिस्तारै बढ्छ, जुन हाम्रो खानपान र जीवनशैलीसँग सम्बन्धित छ । जबकि अचानक पनि मो’टोपन बढ्न सक्छ । मानौं, तपाईंको खानपानमा खास परिवर्तन छैन । जीवनशैली उस्तै छ । जं’कफुड वा ता’रेको, भु’टेको खानेकुरा पनि त्यति खानु भएको छैन ।
दिनभर सुत्ने काम पनि गर्नुभएको छैन । तर अ’चानक मो’टोपन बढ्यो, किन ? यसरी मो’टोपन बढ्नुमा भौ’तिक वा शा’रीरिक कारण मात्र नहुन सक्छ । भाव’नात्मक कारणले पनि मो’टोपन बढ्न सक्छ । जहिले पनि धेरै खानेकुरा खाएकाले मो’टोपन बढ्छ भन्ने छैन । ऐश–आरामपूर्ण जीवनको कारण मात्र पनि मो’टोपन बढ्छ भन्ने छैन ।
कुनैबेला यावत कारणविना नै मो’टोपन बढ्न सक्छ । खासगरी यसमा हाम्रो भावनात्मक स्वस्थ्य जोडिएको हुन्छ । हामीमा पैदा हुने भा’वनात्मक स्थितिको सोझो असर शरीरमा पनि पर्छ। त्यसैले स्व’स्थ्यका लागि श’रीर मात्र होइन भावनात्मक स्थिति पनि ठिक हुनुपर्छ। मो’टोपन नि’यन्त्रणका दश प्रा’कृतिक तरिका मो’टोपन कसरी घ’टाउने ? धेरैले आफ्नो खानपानमा कटौती गर्छन् । कति कडा शा’रीरिक श्र’म गर्छन् । व्या’याम गर्छन्, जी’म धाउँछन् । यद्यपि सन्तुलित जीवन अपनाएर प्राकृतिक रुपमा पनि मो’टोपन घ’टाउन सकिन्छ ।
स्व’स्थ्य खानपान पहिलो सूत्र हो । दिनभर थोरैथोरै खाना खाने । एकसाथ धेरै खानेकुरा सेवन गर्दा पनि मो’टोपन बढ्छ। बिहान चाँडै उठ्ने । उठेपछि कागती र मह मिसाएको पानी पिउने । यदि तपाईंलाई को’लेस्ट्रल कम गर्नु छ भने ता’तो पानीमा दालचिनी पनि मिसाउन सक्नुहुन्छ । म’धुमेह नि’यन्त्रण गर्ने हो भने मे’थी दा’ना भिजाएर राख्ने र त्यसैको पानी सेवन गर्ने । साथसाथै यी पे’यले मो’टोपन घ’टाउन पनि सहयोग गर्छ । अं’कुरित गे’डागुडी, दूध, अ’न्डा, ड्राइ फ्रुट्स आदिलाई बिहानको नास्तामा सामेल गर्न सकिन्छ । बिहान नास्ता खाइसकेपछि जब भो’क लाग्छ, खाना खानुभन्दा अघि थोरै फलफूल से’वन गर्नु उचित हुन्छ ।
यसले तपाईंलाई भि’टामिनका साथसाथै मिनरल्स पनि प्रदान गर्छ । रो’ग प्र’तिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ । फलफूलको सेवन कम क्यालोरीमै भरपुर पोषण पनि मिल्छ । खानामा दाल, सलादलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । मौसम अनुकूल सलादलाई हरेक छाकमा सामेल गर्नु उचित हुन्छ ।साँझको खाना हल्का र सुपाच्य हुनु जरुरी छ । सकेसम्म झोलयुक्त खानेकुरा, सागसब्जीको रस, फलफूल सेवन गर्नु उचित हुन्छ । साँझको खाना खानसाथ सुत्ने वा आराम गर्ने, टिभी हेर्ने, मोबाइल चलाउने जस्ता गतिविधि त्याग्नुपर्छ ।
साँझ खाना खाएर हल्का हिँडडुल गर्नु उचित हुन्छ । पर्याप्त निद्रा जरुरी हुन्छ । नियमित ७ देखि ८ घ’ण्टासम्मको ग’हिरो नि’द्रा लिनुपर्छ।दिनभर एकै स्थानमा बसिरहने नगरौं । केही न केही सानोतिनो काम गर्ने वा शारीरिक श्र’म गर्ने गरौं । आफ्नो काम सकेसम्म आफैँले गरौं । बगैंचाको काम, खेतीको काम वा कुनै पनि किसिमको शा’रीरिक काम गर्नु उचित हुन्छ ।